Yakhele amehlo ezinganeni? Ngokushesha udokotela!
Isimo lapho ikhule amehlo ezinganeni ngokuvamile, nakuba lesi sifo futhi ezakho esigabeni izifo ezivamile ezinjengomkhuhlane noma sibi nezifo zokuphefumula. Kutholakale imbangela yokushona suppuration lapho uqala nje ukubona akunakwenzeka, kukhona izinto ezimbalwa ukuthi kudingeka zixazululwe. Ekuqaleni, kuhambisana izimpawu, futhi engu-ingane. Uma ikhule amehlo ezinganeni, Kuyaphuthuma ukubona kudokotela wezifo zamehlo, ezobheka ukuthi imbangela isifo, ukusazi ngokunembile isifo esikuphethe futhi linqume ukwelashwa okufanele.
Njengoba kushiwo ngenhla, kuphela lochwepheshe ukwazi ukunquma etiology lesi sifo embuzweni. Self-uphethwe Ungase futhi senze isimo sishube. Nokho, ungakwazi ukucabanga izizathu eziningana ongazama ngazo ukuchaza kuze kube ukushaywa emtholampilo. Lapho inyanga ingane 1 ikhule amehlo futhi kwakukhona ukukhathazeka mayelana nokuziphatha ke cishe, ke dacryocystitis. enkingeni enjalo engenzeka nengane ngokushesha emva kokuzalwa, kodwa ngezinye izikhathi zenzeka emasontweni 2-3. Isizathu itholakala hhayi ukudalula kuya ekupheleni uvule imbobo lacrimal, lapho kukhona ukuvuvukala sac lacrimal. Ungakwazi geza amehlo futhi ingane, futhi ezikhethekile ukuvuza iconsi, kodwa umphumela kuyoba isikhathi esifushane, futhi kamuva konke kuzophindwa futhi. Bheka udokotela wamehlo futhi imithi massage, okuyinto ngaphansi kwezimo ezithile kungenziwa kalula kwenziwe futhi bebodwa, sidinga kuphela ukufunda.
In parallel massage uzobe babelwe komunye nezisombululo ezakhelwe ukuwasha kanye instillation of iso. Ngokuvamile, umuntu elashwa kwanele isiteshi livuliwe, futhi isimo uhlaliseke. Lapho amehlo yakhele izingane dacryocystitis, kukhona caveat: umsebenzi ngaphambili ngokusebenzisa Yiqiniso, ngcono. Lapho ufika ingane 6 izinyanga, lesi sifo kungazibhebhethekisa.
Ukubukeka suppuration endaweni iso e izingane ezindala elihlobene ne ukuvuvukala umsele lacrimal nzima, ngakho kulesi simo singakhuluma conjunctivitis. Nokho, lolu hlobo isifo singalapheki wawususa in izinsana. Ngaphezu kwalokho, lesi sifo ngokuvamile iningi kwenzeka esibelethweni noma ngemva kokuzalwa ngenxa non-ukuhambisana nemithetho kwenhlanzeko , noma xhumana ne zomuntu onesifo. Uma ikhule amehlo nezingane conjunctivitis, singabona ukubukeka ngisho ezinye zezimpawu: amehlo ezinzima lwamanzi, nobunzima ekuvuleni amehlo ngemva elele, nezinkophe avuvukele zivutha ukulunywa, ukuzwela okukhulu ekukhanyeni okukhazimulayo. Kulokhu, isidingo sokwelashwa kuphezulu, ngakho uyephuza nokuya emtholampilo akudingekile. Akudingeki ukwethuka - kuhambisana nazo zonke izimfuneko lesi sifo esebohlile ngemva kwezinsuku ezimbalwa.
Kuthiwani uma ingane ikhule kakhulu amehlo, kodwa kudokotela ukusebenzisa okwamanje akukho kungenzeka? Zama ngokuvamile (mayelana kanye ngehora) nge swab ukotini oswakanyiswe ngamanzi afudumele, wageza ingane amehlo, okwenza ukunyakaza kusukela elingaphandle ekhoneni kwangaphakathi. Ngaso sonke isikhathi uma ufuna ukusebenzisa i-swab fresh namanzi plain kungase kuthathelwe indawo nekufakwa itiye elimnyama noma chamomile umhluzi. Ngemva kokugeza, kuyinto efiselekayo Nokho ukusebenzisa amaconsi medicated, ngaphandle luhlolo ngaphambi ngu kudokotela wezifo zamehlo qaphela ngokwabo ukhethe noma iyiphi inqubo yokwelapha! Ngakho-ke, ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze ubone udokotela wakho. Inqubo kudingeka kokubili amehlo, kuwufanele ukuqala nge enempilo. Ungavumeli ingane yakho ukukuthinta izibambo iso bese bagcine sinemikhuba emihle yenhlanzeko ukuvimbela ukutheleleka lokusekelwa amanye amalungu omndeni.
Claus suit - Lokhu Santa Claus
Machine-izihlalo izingane. ukukhetha okungcono
Art Studio ngomntwana: Ukukhethwa sokunquma
My Little Pony - amathoyizi, ukuze sinqobe izwe
Ithuluzi Wezingane zomculo - amathoyizi zomculo izingane
"Adameks Enduro": imishini, izici, ukubuyekezwa
Iqiniso futhi seborrheic eczema - incazelo, ukwelashwa, zokuvimbela
Nokomisa imifino, izithelo kanye neminye imikhiqizo eminengi enomsebenzi
"Ariston", umshini wokuwasha: iphutha amakhodi, izimbangela zazo kanye nokulungiswa
Indlela Steam ukuze ibuyisele le mali ngoba umdlalo futhi kanjani kubo?
Imikhosi ezithakazelisayo kakhulu ngo-September
TOP-100 izincomo umfana
Top 50 abalobi ezinonileyo amabhuku
"Alpha Finance": ukubuyekezwa, amasevisi
Izandiso eyelash. isakhiwo imiphumela. umphumela yemvelo
Kusho "Ambrobene" (amaphilisi). imfundo
"I Headless wehhashi": nabalingiswa abasemqoka, incazelo emfushane
I-starling iyinyoni ewusizo futhi eculayo